Mayelana giroskutere namuhla iphupho kwabaningi. Futhi labo asebethole walithenga, ujabulela imizwelo okukhulu okuvela ispalzovaniya yakhe. Igajethi isimangaliso manje kubonakala nje kuphela emigwaqweni. Ayikho cishe ngenkuthalo esetshenziswa ezethulweni, ngamaholidi, ngisho izitolo, lapho kuba lula kakhulu ukuba anqobe into ethile ibanga umxhwele, ngebhayisikili mini Segway.
Giroskutery Smart Balance 8 amayintshi ezinemibala ehlukahlukene LED kwasemuva ngamasondo amaphiko. Lokhu kuvumela hhayi kuphela ukuze uhlabe abanye umxhwele kodwa obonakalayo ngisho ebumnyameni. Lapho umculo udlalwa nge-Bluetooth, izibani LED blink isigqi amashuni.
Ibanga esiphezulu okuyinto Onqobayo giroskuter ingamakhilomitha angu-20. Ungahambisa ngesivinini kufika ku-15 km / h. Imoto ekhiqizwa e-China. Kuyinto kuncike yesiqinisekiso lonyaka owodwa. Leli bhokisi libuthene kusuka polymer bafake ukumelana eyenza imishini eqinile futhi ikwamukela okushiwoyo kakhulu zonke izinhlobo zezithiyo endleleni (ezifana amatshe, Amahlumela nokunye. N.). Ukuze kuqinisekiswe ukuphepha kwabasebenzisi gyro elawula emthambekeni imoto. Kunciphisa noma ngokuphelele amabhlogo amandla motor uma engela enyakazayo siba sikhulu kunesijeziso nomakhi kusengaphambili. Giroskutery kweso aziswe umkhawulo ijubane uphawu olucacile umsindo. Zibizwa ngokuthi simulators ezahlukene apharathasi vestibular. Speed zingalawulwa ngokumane ekushintsheni isikhundla umzimba.
Giroskuter compactness ezahlukene. ubude nobubanzi - 584 kanye 186 amamilimitha angu, ngokulandelana. Idivayisi Kulula ukuhambisa e isikhwama esikhethekile. Imelana lokushisa kusuka degrees 10 kuya 40 ukushisa Celsius, kodwa okungcono kakhulu esinakho iwukusebenzisa igajethi ku uhla kusuka +10 ukuze +30. Ayanikezelwa imfundo ngesiRashiya nebhethri. Idivayisi ukala 12 amakhilogramu.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi izingane ezincane kanye nabantu asebekhulile kutuswa uvuke giroskuter e igiya umnyuziki zokuzivikela, kubandakanya nangesigqoko, amadolo pads, amagilavu, ukulungisa esihlakaleni futhi indololwane.
Samsung ishaja has a voltage ka 36 V. Amandla ingqikithi amasondo - Watts 700. Kuzothatha amahora amathathu ukuze ukushaja ngokugcwele giroskuter. ukuthenga igajethi ethandwa can futuland.ru sayinwe Boutique. Mini Segway okwethulwa kulesi esitolo inthanethi anhlobonhlobo. Khetha ukuthi iyiphi umbala oda!
Giroskutery Smart Balance 8 amayintshi kukhona amasondo ezinkulu, okwenza kube lula kakhulu ukuba banqobe ebusweni semfene. Ngaphezu kwalokho, ukuze zithole induduzo anda ngenkathi ushayela. Lokhu kwenza kube ephephile ukuyisebenzisa, ngisho Wabasaqalayo giroskuter.
I ijika ukufunda ukuphathwa kahle. Engingakusho nje iqale mini-Segway, kancane ukuncika phambili, futhi uqale ezihambayo. Lokhu imoto unekhono self-okulinganisa, yingakho kalula ezijatshulelwa kokubili izingane nasebekhulile.
Ukuqapha voltage udlulisela - idivayisi iphinde Umgomo we operation